प्राय प्रेम सफल हुने यी तिन राशी हेर्नुहोस् ! हेर्नुहोस् कुन-कुन राशिको प्रेम सफल हुन्छ ! – Medianp
प्राय प्रेम सफल हुने यी तिन राशी हेर्नुहोस् ! हेर्नुहोस् कुन-कुन राशिको प्रेम सफल हुन्छ !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, मङि्सर १५, २०७५१३:३२0
आफ्नो प्रेम जीवन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा धेरैलाई चिन्ता रहेन गर्छ। आफुले रोजेको व्यक्तिसँगनै जीवन व्यतित गरौँ भन्ने हरेकको चाहना रहने गर्छ। तर विभिन्न कारण एस्साथै कुण्डलीमा रहने दोषका कारण सम्बन्ध टुट्ने गर्छ भन्ने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ज्यादातर कुन राशिको प्रेम विवाह हुन्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ। प्रायजसो प्रेम विवाह हुने राशिहरु निम्न उल्लेखित रहेका छन्।
यस राशीहुनेहरुको मूल प्रकृति शान्त मानिने गरिन्छ। शान्त स्वभावका रहने भएका कारण यस राशी भएका मानिसहरु सबैको मनमा छिट्टै पर्ने गर्छन्। प्राय यस राशिका मानिसहरुको प्रेम सफल रहने गर्छ भने विवाहमा समेत परिणत हुने गर्छ। प्रारम्भिक वैवाहिक जीवनमा केहि तनाव रहने भएता पनि विस्तारै भने सम्बन्ध प्रगाढ भएर जाने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ।
यस राशी हुने मानिसहरु प्रकृतिमा धेरै गम्भीर रहने गर्छन्। साथै हरेक कार्य समझदारीका साथ सम्पन्न गर्ने क्षमता समेत राख्ने गर्छन्। साथै धेरै मायालु र रोमान्टिक स्वभावक रहने यस राशिका मानिसहरुको प्रेम प्राय सफल रहने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यस राशी हुने मानिसहरु आफ्नो प्रेमीलाई उच्च स्थान दिने हुँदा प्रायको प्रेम विवाह हुने गर्छ।
प्रेम विवाहको मामलामा यस राशी हुने मानिसहरुलै ज्योतिष शास्त्रमा अत्याधिक भाग्यमानी मानिने गरिन्छ। आफ्नो प्रेम सफल बनाउनको लागि ज्यान दिएर लागि पर्ने हुँदा यस राशिका मानिसहरुको प्रेम प्राय जस्तो सफल हुने गर्छ। प्रेमित वातावरण बनाउन खप्पिस यस राशिका मानिसहरु प्रेममा पूर्ण रुपले लिप्त रहने हुँदा यस राशिका मानिसहरुको ज्यादा प्रेम विवाह हुने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज बुशको निधन
जान्नुहोस् ! कस्तो परिवारमा छाउछ बढी उमंग र खुशी, एकल की संयुक्त !
१४ वर्षदेखि बडि बिल्डिंग सुरु गरेकी यी युवतीलाई देख्ने बित्तिकै मानिसहरु थरथर काम्छन् ! (तस्विरसहित)